Wasiiradda Yurub oo ka shiray siddii loo joojin lahaa qaxootiga Yurub u soo tahriibaya | Somaliska
Wasiiradda Yurub oo ka shiray siddii loo joojin lahaa qaxootiga Yurub u soo tahriibaya
Wasiiradda dalalka midowga Yuurb u qaabilsan cadaaladda ayaa maalintii shalay aheyd waxaa shir ay kaga arrinsanayaan joojinta qaxootiga u soo tahriibaya Yurub ku yeesheen caasimada magaallo madaxda dalkaasi dalka Istooniya ee Tallin.
Kulankaas oo ahaa mid ay wasiiraddu kaga hadlayeen xaaladaha iyo daruufaha adag ee tahriibayaasha ku heysta gudaha Talyaaniga, kuwaas oo intooda badan soo mara badda u dhaxeysa Liibiya iyo Talyaaniga eeMeteeriniyan-ka naftoodana uga haliga sideey u soo geli lahaayeen qaaradda Yurub.
“Waa in la joojiya doomaha halista ah ee Liibiya ka imanaya, maxaa yeelay kuwa wax tahriibiya waa kuwa lacagtooda uun eegana. Xalna waxaan u aragnaa in Liibiya ay iskaashi iyo wadashaqeyn la yeelataa Midowga Yurub” ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda Iswiidhan, Morgan Johansson oo waramayey idaacadda raadiyo Iswiidhan qeybteeda wararka faafisa ee Ekot.
Midowga Yurub waxeey haatan doonayaan ineey lacago dheeraad ah siiyaan hey’adaha ilaaladda ka haya xeebaha Liibiya si loo hakiyo tariibayasasha sida sharci darrada ah halkaas uga soo talaaba. Ugu dambeyntiina Talyaaniga ayaa doonaya in wax laga qabto dhibaatadda ka heeysata qaxootiga faraha badan ee dhanka Talyaaniga sida sharci darradaha ah doomaha uga soo talaaba. Talyaaniga ayaa sidoo kale doonaya in urruro iskood isku xil qaamay oo baddaha ka soo bad baadiya qaxootigaas laga ilaaliyo ineey xeebaha u talaabaan.
Soomaali Sweden joogta oo laysku diiday
“Baarlamaanka ayaan teendho ka hor dhisanaynaa”
Malta ma lagu celiyaa mise maya?